BBC Somali - Warar - Xabbad-joojin ayaa ka hirgashay Qasa
Xabbad-joojin ayaa ka hirgashay Qasa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 22 Novermber, 2012, 06:07 GMT 09:07 SGA
Falastiiniyiin u dabbaaldegaya xabbad-joojinta
Idaacad Israaiil ayaa sheegtay in gantaallo laga soo riday dhinaca Qasa, laakiin aanay Israaiil ka jawaabin.
Xalay ayaa kumanaan reer Qasa ah ay isugu soo baxeen jidadka iyaga oo u dabaaldegaya xabbad joojinta.
Shalay ugu yaraan labaatan iyo kow qof oo Isaariili ah ayaa ku dhaawacmay markii uu qarax ka dhacay bas marayay magaalada Tel Aviv.
Militeriga Israaiil ayaa sheegay in bambooyin ay ku garaaceen in ka badan boqol goobood oo ku yaal magaalada Qasa, iyadoo ay socdaan dadaalada xagga dilblomaasiyadda ee la isku dayayo in xabbad-joojin lala gaaro Xamaas.
Israaiil waxay sheegtay inay ka hortagtay gantaallo ay Falastiiniyiintu rideen.